ရှင်းလင်းချက် | အပြာရောင်၊ အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်လေဆာရောင်ခြည်ညွှန်ပြပါ - Lasers-Pointers.com
ဤအထွေထွေပConditionsိညာဉ်စာချုပ်များ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထွေထွေအခြေအနေများ) သည် Lasers-Pointers.com (နောက်ပိုင်းတွင် Lasers-Pointers.com) မှကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များကို၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် www.Lasers-Pointers.com တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကတ်တလောက်တွင် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်။
အထွေထွေအခြေအနေများသည်အထက်ဖော်ပြပါစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်အမိန့်ကိုလက်ခံပြီးလက်ခံသည့် အချိန်မှစ၍ Lasers-Pointers.com နှင့် ၀ ယ်သူ (ဝယ်သူ) တို့အားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများစွာကိုချန်ထားပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဖက်စလုံးမှမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါလက်ခံမှုသည်အမိန့်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်သည်ဤအခြေအနေများကိုသေချာစွာဖတ်ရှုရမည်။
မတူညီသောဝါကျ၏ခေါင်းစဉ်သာသိကောင်းစရာများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အထွေထွေအခြေအနေများ၏အနက်ကို, ကိုထိခိုက်အရည်အချင်းပြည့်မီသို့မဟုတ်တိုးချဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၁။ ပါတီများပါ ၀ င်သည်
အမည်: လူးဝစ် Corraliza Sanchez
NIF: 4857077-Y ကို
မှတ်ပုံတင်ရုံး: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
၀ ယ်ယူသူသည်သင်အား ၀ က်ဘ် www.Lasers-Pointers.com ၀ က်ဘ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဦး အားသင်အမှာစာနှင့်၎င်း၏လက်ခံမှုကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင်အတူတူပင်တွင်ထားရှိသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
ဝယ်သူသည်မှတ်ပုံတင်ပြီးအောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရမည် - အမည်နှင့်အမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ CIF / NIF၊ ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာ၊ ပေးပို့မည့်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည်ဤအထွေထွေအခြေအနေများကိုလက်ခံရမည်။
၀ ယ်ယူသူမှပေးသောဤအချက်အလက်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်လိမ့်မည် (အပိုင်း“ ဥပဒေရေးရာသတိပေးချက်”)
2 ။ စာချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်
ဖောက်သည်များက Lasers-Pointers.com မှသင့်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်တင်ထားသောထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်း။ ဤရွေ့ကားပုဂ္ဂလိကစားသုံးရန်ရည်ရွယ်လေဆာထောက်ပြထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်သည်ဝက်ဘ် www.Lasers-Pointers.com တွင်ပေါ်လာသောထုတ်ကုန်များအတွက်သာကန့်သတ်ထားပြီးကမ္ဘာအနှံ့ဝယ်ယူမှုများအတွက်တရားဝင်သည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင်ကုန်ပစ္စည်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မော်ဒယ်လ်၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ကျွန်းဆွယ်နှင့်ဘာလာရီရစ်ကျွန်းများတွင်ပါ ၀ င်သော VAT နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုကာလကိုပြသသည့်ကုန်စည်တစ်ခုစီတွင်အချက်အလက်စာရွက်များပါရှိသည်။ ဖောက်သည်ထံသို့။
သင့်မှာယူမှုကိုပြုလုပ်သည့်အချိန်နှင့်လက်ခံမှုမပြုလုပ်မီကြိုတင်မှာကြားမှု၏စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူထံသို့ဆက်သွယ်ပါမည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းမှာ ၀ ယ်ယူချိန်တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်လာသည့်စျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
4 ။ ကမ်းလှမ်းချက်ကို၏လက်ခံမှု
ဖောက်သည်သည်မှာထားသည့်အမှာစာကိုသဘောတူခွင့်ပြုသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ယခင်ကဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူတူ၊ ဖောက်သည်သည်အထွေထွေအခြေအနေများကိုလက်ခံထားရမည်။
အော်ဒါတစ်ခုစီအတွက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်နည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည်။ သင်မှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
က) ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု -
ဖောက်သည်သည်ကုန်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းအတွက် Lasers-Pointers.com အကောင့်သို့ဘဏ်ငွေလွှဲရမည်။ လွှဲပြောင်းရာတွင်အမိန့်နံပါတ်ကိုဖော်ပြရမည် (နံပါတ်သည်အမိန့်ပြီးဆုံးသောအခါစနစ်မှအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသည်); Lasers-Pointers.com သို့တူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင်။
ငွေလွှဲပြောင်းမှုသည်အမှာစာပြီးဆုံးချိန်မှ (၁၀) ရက်အတွင်းငွေပေးချေမှုကို ၀ ယ်ပြီးနောက်ပေါ်လာသောဘဏ်အကောင့်သို့လွှဲပြောင်းရမည်။ ထိုအချိန်ကာလအတွင်းငွေပေးချေမှုအထောက်အထားမရှိလျှင်အမိန့်ကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
ငွေဖြည့်ကဒ်သည်ငွေပေးချေမှုကိုကတ်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုသည် ၁၀၀% သေချာသည်။
အမှာစာများပေးပို့ချိန်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုရေးသားသောထုတ်ကုန်များရရှိမှု၊ ၀ က်ဘ် www.Lasers-Pointers.com ၏ကတ်တလောက်ရှိထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ tabs များတွင်ဖော်ပြသောရရှိနိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ အမှာစာများပေးပို့ခြင်းအတွက်အချိန်တွက်ချက်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောစည်းကမ်းချက်များသည် ၀ ယ်သူကအမှာစာပေးချိန်တွင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြော်ငြာပေါ်လာမည့်သူများဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏တရားဝင်အမိန့်များတွင်ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုတွက်ချက်မှုအတွက်လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်, Lasers- ညွှန်ပြဘဏ်စာရင်းနံပါတ်အတွက်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းသို့မဟုတ်ငွေသားဝင်ငွေအားဖြင့်ဖောက်သည်အားဖြင့်ငွေပေးချေမှု၏သဘောပေါက်၏အထောက်အထားသတ်မှတ်ရက်နောက်ဆုံးနေ့ Pointers.com ။
သို့သော်ဤရရှိနိုင်သောကာလကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကုန်ဆုံးရန် ဦး ဆောင်သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာကြားမှုတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပေးပို့မည့်အချိန်သစ်ကိုအချိန်တိုအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားညွှန်ပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်း၏အဆုံးသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လျှင်၊ ဝယ်သူအားအလားတူလက္ခဏာများမဟုတ်သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်နှင့်တူသောစျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ်လိုက်သောအမှာစာများအတွက်ကြိုတင်ပေးဆောင်ရမည့်ငွေကိုရှေး ဦး ပြန်၍ ပေးချေရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ကြိုတင်ပေးငွေ
Lasers-Pointers.com ကြောင့်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း၊ ရရှိနိုင်သောသက်တမ်းအရဆယ်ရက်ကျော်ကြာစွာပေးပို့မှုနှောင့်နှေးခြင်းသည်ဖောက်သည်အားသူ၏အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဆိုပါကသူသည် info @ lasers-pointers လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်စာရေးခြင်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။ com နှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင်ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်မျှမပါဘဲ၊ လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်၊ တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သောနည်း။
ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်အချိန်သည် ၀ ယ်ယူသူမှရွေးချယ်သောအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ဤဝေါဟာရများသည်အမြဲတမ်းအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်အာမခံထားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အထုပ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ဖောက်သည်ကသူ၏လက်ခံမှုကိုလက်ခံပြီးကျွန်ုပ်ရရှိသောကုန်ကျစရိတ်များကိုနားလည်သည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝယ်ယူဖြည့်စွက်မရလျှင်။
Lasers-Pointers.com နှင့်မသက်ဆိုင်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပေးပို့ပြီး ၇ ရက်အတွင်းဖောက်သည်သို့မပေးပို့သောအမှာစာများကိုရောင်းသူထံသို့ပြန်ပို့ပါမည်။ အမိန့်အားလုံးကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး၊ ၀ ယ်သူထံသို့ပြန်လည်ပေးအပ်မည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်မျှမရှိဘဲလက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်။
ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန်အချက်အလက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပေးပို့သည့်လိပ်စာတွင်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ပို့ဆောင်ပေးမည်။ ဤလိပ်စာ၏နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် ၀ ယ်ယူသူကကျခံမည့်ကုန်ကျစရိတ်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အမိန့်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များနှင့်သူလက်ခံသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသူပေးပို့သည့်လိပ်စာတွင်ပေးပို့လိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏ပို့ဆောင်ရေးမှတ်စုတွင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်တင်ပို့မည့်အထုပ်အရေအတွက်၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန်၊ အမှာစာနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ ။
ငွေတောင်းခံလွှာများအပြင်ဝယ်သူအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကို ၀ ယ်ယူသူထံသို့အမိန့်တစ်ခုစီတိုင်းကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပေးလိမ့်မည်။
ငွေတောင်းခံလွှာပျောက်နေပါကဖောက်သည်သည် info@lasers-pointers.com လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်တောင်းခံနိုင်ပြီးငွေတောင်းခံလွှာကိုင်ဆောင်သူ၏အမည်နှင့်အမှာစာနံပါတ်ကိုပြပြီးအီးမေးလ်ဖြင့်ထပ်မံပို့ပေးပါမည်။
အကယ်၍ ပို့ဆောင်သည့်အချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်၏ထုပ်ပိုးမှုများကိုကိုင်တွယ်စရာမလိုဘဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်ဆိုပါကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ်တူညီသောအမှားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချို့ယွင်းချက်များရှိသည် လက်ခံရရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ဝယ်သူမှပေးပို့စာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီး Lasers-Pointers.com သို့ (info@lasers-pointers.com လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်) ဆက်သွယ်၍ အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ရမည်။ သက်ရောက်မှုရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်တောင်းခံခြင်းနှင့်၎င်းအားအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အတူတူပေးရသောစျေးနှုန်းပြန်အမ်းခြင်းတို့ကိုတောင်းခံနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ကိုဖြည်ချပြီးနောက်သာသာလွန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ထုတ်လုပ်သောချွတ်ယွင်းမှုများသည်ကုန်ပစ္စည်းမှရရှိသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ဖော်ပြ၍ info@lasers-pointers.com လိပ်စာသို့လိပ်စာလက်ခံရရှိမှုမှအီးမေးလ်ဖြင့် info@lasers-pointers.com သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ရမည်။ နှင့်ထိခိုက်နစ်နာထုတ်ကုန်၏ပြန်လာတောင်းဆိုခြင်းနှင့်အတူအသစ်တစ်ခုကိုအားဖြင့်အစားထိုးသို့မဟုတ်တူညီသောအားဖြင့်ပေးဆောင်စျေးနှုန်းပြန်အမ်း။
7 ။ အမိန့်များပယ်ဖျက်
သင်၏အမှာစာကိုမပေးပို့သေးပါကအမိန့်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုသာလက်ခံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်ဖျက်သိမ်းလိုပါကပေးပို့ခြင်းမရှိပါကသင်အနေဖြင့်မှာယူရို ၁၀ ယူရိုဖြင့်ယူဆောင်နိုင်ပြီးအမှာစာငွေပေးချေမှုအဖြစ်ပေးချေပြီးသောငွေပမာဏနှင့်လျှော့လိမ့်မည်။ သင်ပေးပို့ပြီးသည့်အခါငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်သင်၏အမိန့်ကိုမပေးရသေးပါကသင် Lasers-Pointers နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြွေးမြီကိုလက်ခံခြင်းနှင့် ၀ န်ခံခြင်းမပြုပါကပေးအပ်မည့်မည်သည့်အကောင့်တွင်မဆိုဘဏ်စာရင်းမှ ၁၀ ယူရိုကိုပေးရမည်။ com ဒီငွေပမာဏကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်သင့်လျော်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်ဥပဒေရေးရာအတိုင်းအတာကိုယူလိမ့်မည်။ သင်၏အမှာစာကိုပေးပို့ပြီးပါက ၁၄ ရက်အတွင်းပြန်ပို့နိုင်သည်။ သို့သော်ပို့ဆောင်စရိတ်များကို ၀ ယ်သူ / ၀ ယ်သူက ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက် ၁၅ ယူရိုကိုပြန်ပေးရမည့်ပမာဏမှနုတ်ယူလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အမိန့်၏ထုတ်ယူခြင်း။
ဝယ်သူ / ဝယ်သူ၏တာ ၀ န်မှာတောင်းဆိုထားသောထုတ်ကုန်သည်သင်လိုချင်သောပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်လျှင်ဝယ်သူ / ၀ ယ်သူ၏တာ ၀ န်သည် Lasers-Pointers.com သို့ ဆက်သွယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူ။
Lasers-Pointers.com မှလွဲ၍ အခြားအကြောင်းပြချက်များအရ ၀ ယ်ယူသူသည်ဝယ်သူ / ဝယ်သူက ၀ ယ်ယူခြင်းကိုငြင်းဆိုပါကသူသည်ပို့ကုန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလက်ခံသူထံတောင်းခံနိုင်သည်။ 20 €မှာခန့်မှန်းရသည်။
8 ။ ကုန်ပစ္စည်းအာမခံ
၀ ယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းသည်စာချုပ်နှင့်မကိုက်ညီပါကသန့်ရှင်းမှုကိုတောင်းဆိုရန်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများဖြင့် ၀ ယ်သူအားကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်မှုတွင်အာမခံချက်များအတွက်ဇူလိုင် ၁၀ ရက်၊ ဥပဒေအမှတ် (၂၃/၂၀၀၃၊ ဥပဒေ ၂၃/၂၀၁၃) ၏တရားဝင်မူဘောင် မဖြစ်နိုင်သို့မဟုတ်အချိုးအစားမညီမျှမှုမဟုတ်လျှင်ပစ္စည်းကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်အစားထိုးခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါကသို့မဟုတ်မအောင်မြင်ပါကစားသုံးသူသည်စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသည်တင်ပို့သည့် နေ့မှစ၍ ၂ နှစ်အာမခံပါသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်လုပ်သူအာမခံချက်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူခြင်းနှင့်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နောက် - ရောင်းချမှုပံ့ပိုးပေး။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါကထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီမှဆုံးဖြတ်သည့်နည်းပညာအကူအညီပေးရေးဝန်ဆောင်မှု (SAT) ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဤအချက်ကြောင့် Lasers-Pointers.com သည်ဖောက်သည်များအားသီးသန့်စားသုံးရန်ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အမှာစာများ၏ထုတ်ကုန်များပေးပို့သည့်အချိန်၌တည်ရှိမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
Lasers-Pointers.com ၏အာမခံချက်သည်ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် (၆) လဖြစ်ပြီးအမှာစာမှ (၆) လအကြာတွင်အာမခံကိုထုတ်လုပ်သူမှတိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းသည်။ Lasers-Pointers.com သည်ဤထုတ်ကုန်များမှတစ်ခုအားမအောင်မြင်ပါကပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်းအတွက်တူညီသောပို့ရန်ထုတ်လုပ်သူ၏လိပ်စာကို ၀ ယ်သူအားဝယ်သူအားပေးလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ၀ ယ်သူကဤပြန်အမ်းငွေကိုကုန်ကျမည်။
·ကုန်ပစ္စည်းကိုတင်ပို့ပြီးမှပထမ ၆ လအတွင်းချွတ်ယွင်းချက်ပေါ်လာပါကသူဝယ်ယူသောအခါကွဲလွဲမှုတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်နှင့်စားသုံးသူမှသက်သေပြစရာမလိုပါ။
·သို့သော် ၆ လအကြာနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များတွင်လိုက်နာမှုမရှိခြင်းပေါ်ပေါက်လာပါကထုတ်လုပ်သူသည်အာမခံချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်လွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာလိုအပ်နိုင်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းမှုသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှုသိသာသောကိစ္စများတွင်ပြproblemနာမရှိပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကုန်ပစ္စည်းအားစားသုံးသူအားဆုံးရှုံးသောအချိန်ကာလအတွင်းအာမခံသက်တမ်း၏တွက်ချက်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ဥပမာ၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ၁၅ ရက်ကြာပြုပြင်ပါက၊ အာမခံကာလသည်မူလစီစဉ်ထားသည်ထက် ၁၅ ရက်နောက်ကျလိမ့်မည်။
ဤအာမခံချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်သည် info@lasers-pointers.com သို့လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ပို့။ Lasers-Pointers.com သို့ဆက်သွယ်ရမည် - ငွေတောင်းခံလွှာကိုင်ဆောင်ထားသူ၏အမည်၊ နံပါတ်၊ ငွေတောင်းခံလွှာ။ နှင့် Non- လိုက်နာမှု၏အကြောင်းရင်း။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်လိုအပ်ပါကပို့ရန်လိပ်စာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ပို့ဆောင်စရိတ်ကို ၀ ယ်ယူသူမှပေးမည်။ ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်း၏ဘေးတွင် ၀ ယ်ငွေပြေစာမိတ္တူနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကမှန်ကန်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအာမခံသဘောတူညီချက်တို့ပါ ၀ င်ရမည်။ ဖောက်သည်မှ Lasers-Pointers.com ထံတောင်းဆိုမှုမှ ၇ ရက်အကြာတွင်၊ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှုကညွှန်ပြသည့်နေရာတွင်မပြုပြင်ဘဲပို့ပေးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနသည်ဤတောင်းဆိုချက်ကိုလက်မခံပါ။ မည်သည့်အာမခံအမျိုးအစားကိုမဆိုပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ဖျက်ပါမည်။ အဆိုပါပစ္စည်းအပေါ်။ ထုပ်ပိုးမှုနည်းသောကြောင့်ပျက်စီးသွားသောအစိတ်အပိုင်းကိုလက်ခံရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်မှုကိုဂရုမစိုက်ပါ။ ဖောက်သည်အားပြtheနာအားအကြောင်းကြားခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအေဂျင်စီမှတိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းခြင်း။ ဤလက္ခဏာများနှင့်မကိုက်ညီသောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုဤအာမခံသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်တောင်မှသင့်ထံပြန်ပို့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်လုံခြုံမှုမရှိသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးအထုပ်ပျက်လျှင်၊ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဝယ်သူကတာ ၀ န်ယူမည်။
A) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းအားလက်ခံရရှိမှုကအာမခံအခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းသက်သေပြပါကတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်မပါဘဲ ၀ ယ်ယူသူထံသို့ပြန်လည်အပ်နှံပါမည်။
·ပြုပြင်သို့မဟုတ်အစားထိုး။ ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကထုတ်ကုန်ကိုအသစ်တစ်ခုနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် (သို့) အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီမှထုတ်လုပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည့်သူသည်ရောင်းသူအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုနှင့်အချိုးမညီလျှင်၊ ရောင်းသူသည်စားသုံးသူမယူဆသရွေ့၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အဆင်ပြေဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုဆိုးကျိုးများ။ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုမရရှိနိုင်ပါကဥပဒေ ၂၃/၂၀၀၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းညီမျှသောသို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးခံစားခွင့်ဆောင်းပါးကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြဲတမ်းအသိပေးခြင်းနှင့်ကြိုတင်လက်ခံခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်မှုအတွက်အာမခံချက်များ၏ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက် (၁၁-၁၇-၂၀၀၃ ရက်နေ့မှ BOE အမှတ် ၁၆၅)
·စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း။ ကုန်ပစ္စည်းကိုအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးရန်မဖြစ်နိုင်လျှင် (သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်)၊ ပြုပြင်ခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်းသည်အချိန်ကာလအားချဲ့ကားပြောဆိုသည့်အခါထုတ်ကုန်ကိုစွန့်ခွာရန်အသုံးမပြုသောအခါ၊ စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း (လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသည်အထိ) ။ ထို့အပြင်စားသုံးသူသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Lasers-Pointers.com သည်ကုမ္ပဏီ မှလွဲ၍ အခြားအကြောင်းပြချက်များအနေဖြင့်ကုန်ကြမ်းများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများကသတ်မှတ်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတွင်ဖော်ပြသောကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းကိုမကျူးလွန်ပါ။ ။
ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းကိုပုံမှန်စာဖြင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၀ ယ်သူအားအရှုံး၊ ပျက်စီးခြင်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူစေမည်။ အကယ်၍ အာမခံထားခြင်းနှင့်အမြန်ပို့ခြင်းသည်ပိုမိုနှစ်သက်ပါကအမြန်အမြန်စာပို့သူမှ ၃ ယူရိုကိုပေးရပါမည်။ ဒီငွေပမာဏကိုဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်။
B) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်း၏လက်ခံရရှိမှုကပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသက်သေပြလျှင်၎င်းသည်ဝယ်သူထံသို့ပြန်ပေးလိမ့်မည်။ ဝယ်သူသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များအားစုစုပေါင်း ၁၀ ယူရိုကုန်ကျရမည်။ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းကိုပုံမှန်စာဖြင့်ပြုလုပ်မည်။ ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာ ၀ န်ရှိသည်။ အာမခံထားခြင်းနှင့်ပိုမြန်သောပို့ဆောင်မှုကိုပိုမိုနှစ်သက်ပါကအမြန်အမြန်အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း။ ဒီငွေပမာဏကိုဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်။
ဂ) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ ပစ္စည်းကိရိယာပျက်ကွက်မှုသည်အာမခံအခြေအနေများချိုးဖောက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိပါက၊ အာမခံအားပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။ ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူသူထံပြန်လည်အပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း ၁၀ ယူရိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအပြင်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးရပါမည်။ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းကိုပုံမှန်စာဖြင့်ပြုလုပ်မည်။ ၀ ယ်သူသည်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာ ၀ န်ရှိသည်။ အာမခံထားခြင်းနှင့်ပိုမြန်သောပို့ဆောင်မှုကိုပိုမိုနှစ်သက်ပါကအမြန်အမြန်အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း။ ဒီငွေပမာဏကိုဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်။
ပစ္စည်းကိရိယာတင်ပို့မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးနောက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ယူရို၏တောင်းဆိုချက်အရဖြစ်စေ၊ အမိန့်တွင်မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေလိပ်စာသို့မဟုတ်နာကြည်းမှုပြောင်းလဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၅ ယူရိုကိုဝယ်သူကပေးလိမ့်မည်။
အထုပ်ကိုမမှန်ကန်သောလိပ်စာဖြင့်ပြန်ပို့ပါကပျက်ကွက်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း (သို့) ငြင်းဆန်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရုံးခန်း၌လက်ခံရရှိသည့်အခါသူသည်သူနှင့်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်သည့်အခါဖောက်သည်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းအသစ်တင်ရန်တောင်းခံပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ၅ €ပေးရပါမည်။ ဖြေရှင်းချက်ကိုသဘောတူရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှအသိပေးချက်မှတစ်လကြာလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်တုန့်ပြန်မှုမရှိဘဲသင်၏ဆောင်းပါးများနှင့်၎င်းတို့မှပေးသောငွေပမာဏကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်စွန့်လွှတ်ခြင်းကိုလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်။
၀ ယ်ယူသူများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်ကုန်များကိုမလျော်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်း (သို့) မသုံးစွဲသည့်အခါမည်သည့်အာမခံချက်ကိုမျှလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
·လျှပ်စစ်လှိုင်းများသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံ voltages ကိုဖြင့်မီးရှို့အစိတ်အပိုင်းများ။
· Lasers-Pointers.com အာမခံတံဆိပ်၏ဝယ်ယူသူမှ (သို့မဟုတ်အမှတ်စဉ်နံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးတံဆိပ်များပါသည့်တံဆိပ်များအပါအ ၀ င်) ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ထုတ်လုပ်သူမှဆိုးရွားလာခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ခြင်း။
စက်ကိရိယာများပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်မတော်လျော်သောအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပြင်ပြင်ပရှိချို့ယွင်းချက်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပြFaနာများ။
·ယင်းသို့မီးလောင်မှု, ရေကြီးမှု, လေ, မြေကြီးလှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မုန်တိုင်းများအဖြစ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးခြင်း။
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပညာရှင်များ၏ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှားနှင့်မူရင်းပြင်ဆင်မှုတွင်မပါ ၀ င်သောနောက်ဆက်တွဲပြုပြင်မှုများသို့မဟုတ်တိုးချဲ့မှုများ။
· configuration ကိုအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းသဟဇာတမဆက်စပ်သောအမှား။
·ဘက်ထရီကဲ့သို့သောအသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ။ ထပ်ခါထပ်ခါအားသွင်းခြင်း / အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
·မတော်တဆမှု, အလွဲသုံးစားမှု, အလွဲသုံးစားလုပ်သို့မဟုတ်မလျော်ကန်သော applications များအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်း။
9 ။ ဆုတ်ခွာ၏ညာဘက်
လက်လီရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်၊ ဥပဒေ ၇/၁၉၉၆ အပိုဒ် ၄၄ တွင်ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်းဖောက်သည်သည်အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ၍ ၁၄ ရက်အတွင်းအမိန့်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ဖောက်သည်သည် ၁၄ ရက်အတွင်း Lasers-Pointers.com ကိုအီးမေးလ် (info@lasers-pointers.com) အားအကြောင်းကြားရမည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ၀ ယ်သူသည်အမှာစာပြန်ပို့ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သတင်းအချက်အလက်ပြန်ပို့နံပါတ်၊ ပို့ခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ပေးပို့သည့်လိပ်စာ) အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုမူရင်းထုပ်ပိုးမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေနှင့်ပြန်လည်မဖြည့်တင်းဘဲပြန်လည်ထားရှိရပါမည်။ ဝယ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သိုလှောင်ရုံများသို့ပို့ရန်ထုတ်ကုန်၏ကာကွယ်မှုနှင့်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်သင့်လျော်သောအတိုင်းအတာကိုလိုက်နာရမည်။ မဟုတ်ပါက Lasers-Pointers.com သည်ပြန်လာရန်ငြင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
ဤကာလ၏အပြင်ဘက်တွင်မည်သည့်အမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၀ ယ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုအမှာစာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုလည်းလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်သူတို့၏သဘောသဘာဝအရ ပြန်၍ မရပါ၊ Client မှတံဆိပ်ခတ်ထားသောအသံသွင်းထားသောဗီဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ discs များနှင့် software များနှင့်အီလက်ထရောနစ်အရထောက်ပံ့ထားသောကွန်ပျူတာဖိုင်များ၊ အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အတွက်ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်တောင်းဆိုမှုများလည်းရှိသည်။ အထုပ်ကိုမှားယွင်းစွာသို့မဟုတ်မပြည့်စုံစွာပြန်ပို့ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်းတွင်လက်ခံရရှိသည့်အခါဝယ်သူအားသူသိရှိစေရန်အကြောင်းကြားမည်၊ သို့မှသာသူသည်သူလုပ်လိုသည့်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသဘောတူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးချက်မှတစ်လရလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်တုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲသူသည် ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလျစ်လျူရှုပြီးသူ၏ဆောင်းပါးများနှင့်သူတို့အတွက်ပေးသောငွေပမာဏကိုစွန့်လွှတ်သည်။
Lasers-Pointers.com သို့ကုန်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ကျခံမည့်ဝယ်သူ။ ပြန်လည်ပေးပို့မှုသည်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအမှားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမတွက်ဆနိုင်သည့်အခြားအကြောင်းရင်းများအတွက်သာဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုဂရုစိုက်ပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းသို့ပြန်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ ကုန်ပစ္စည်းသို့ပြန်ပို့ခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ပျက်စီးမှုအတွက်မဆိုဖောက်သည်မှတာဝန်ယူရမည်။ ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုကိုလက်ခံသည့် နေ့မှစ၍ ၁၄ ရက်အတွင်းပြန်လည်ရောက်ရှိရန်လိုသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူကပယ်ချခြင်းနှင့်ပြန်ရောက်လိမ့်မည်။
ဝယ်သူမှထုတ်ယူခွင့်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူခွင့်ကိုအသုံးချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါက Lasers-Pointers.com သည်ဖောက်သည်မှပေးချေသည့်ငွေများ၊ တင်ပို့မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ငွေပေးချေရမည်။ ကော်မရှင်များ၊ ပြန်လည်ပေးဆောင်ရမည့်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဘဏ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်တွက်ချက်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် ၁၀ ယူရိုဖြစ်သည်။ အဆိုပါငွေပမာဏကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထုတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဆုတ်ခွာခြင်း (သို့) ဖြေရှင်းခြင်းမှရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးကာလအတွင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
၁၀။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏တာဝန်များ
ဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီလက်ရှိအထွေထွေအခြေအနေများကိုဖတ်ပါ။
Lasers-Pointers.com ၏ 11. တာဝန်ဝတ္တရား
၁၂ ။ ဖောက်သည်အခွင့်အရေး
13. Lasers-Pointers.com အခွင့်အရေးများ
တူညီသောရရှိနိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ထုတ်ကုန်၏ပေးပို့ချိန်ကိုပြုပြင်ပါ။
ကြိုတင်အသိပေးစာမပါဘဲ Web ကို Cancel ။
14 ။ အသိပေးချက်များ
ဤစာချုပ်ပေါ်ပေါက်စေသည့်မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုအသိပေးချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့်အရေးအသားများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Lasers-Pointers.com သည်ဤအထွေထွေအခြေအနေများတွင်ဖော်ပြထားသည့်လိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
ဝါကျများ၏ 15 တရားဝင်မှု
ဤစာချုပ်ပါအချက်တစ်ချက်သို့မဟုတ်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်မမှန်ကန်တဲ့ (သို့) အသုံးမပြုနိုင်လျှင်တောင်မှအပိုဒ်ခွဲ (သို့) အစိတ်အပိုင်းများဟာခိုင်မာပြီးတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
16 ။ သက်ဆိုင်စည်းမျဉ်းများ
ဤအထွေထွေအခြေအနေများကိုလက်ရှိစပိန်ဥပဒေဖြင့်ပြဌာန်းထားသည်။ အထူးသဖြင့်မြို့ပြကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ဇွန် ၁၉ ဥပဒေ၊ စားသုံးသူများနှင့်အသုံးပြုသူများကာကွယ်ရေးအတွက်အထွေထွေ၊ Aprilပြီ ၁၃ ရက်၊ ၇/၉၈၊ လက်လီကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်၊ ဇွန် ၈ ရက်၊ ဥရောပပါလီမန်နှင့်ကောင်စီကောင်စီ၏ညွှန်ကြားချက် ၂၀၀၀/၃၁၊ သတင်းအချက်အလက်အသင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဇူလိုင် ၁၁ ရက်ဥပဒေ ၃၄/၂၀၀၂၊ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့ကိုတိုးတက်စေသောစည်းမျဉ်းများ။
အောက်ဖော်ပြပါများသည် www.Lasers-Pointers.com ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
1 ။ ယေဘုယျ
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အထွေထွေစာချုပ်များကိုလက်ခံခြင်းဟုယူဆသည်။
၂။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ဆိုင်မှု
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို Lasers-Pointers.com မှပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏ပါဝင်မှုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသားများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆော့ဝဲလ်များသည် Lasers-Pointers.com ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပါဝင်မှုများကိုမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များမှကာကွယ်ထားသည်။
3 ။ အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှု
Lasers-Pointers.com မှအတိအလင်းခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါကသင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးချခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
4 ။ တာဝန်များ
Lasers-Pointers.com သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ပါ ၀ င်မှု၏တိကျမှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်းအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်တိကျမှုများပါဝင်နိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄ ​​င်း၏ပါ ၀ င်မှု၏တိကျမှု၊
Lasers-Pointers.com သည် Lasers-Pointers.com ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လင့်ခ်ချိတ်ဆက်ထားသောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်အတွက်တာဝန်ယူမှုကိုငြင်းဆိုသည်။
Lasers-Pointers.com သည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုထိခိုက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာများအတွက်တာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
Lasers-Pointers.com အားဤအခြေအနေများကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို Lasers-Pointers.com အားသင်လျော်ရမည်။
6 ။ ဥပဒေပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
ဤအထွေထွေအခြေအနေများကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပြီးစပိန်ဥပဒေကိုပြဌာန်းရမည်။ ဤအခြေအနေများမှပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများကိုစပိန်နိုင်ငံ၊ တိုလီဒိုတရားရုံးများတွင်ဖြေရှင်းရမည်။ သို့သော်၎င်းသည် Lasers-Pointers.com အားအခြားအရည်အချင်းရှိသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်တရားစွဲဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးမပြုရ။
7 ။ ပွောငျးလှဲခွငျး
8 ။ သီးသန့်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝအာမခံ
အော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း။ စုဆောင်းရရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် Luis Corraliza Sánchez၏အချက်အလက်ဖိုင်များတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်၎င်းအားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
သုံးစွဲသူမှ Lasers-Pointers.com သို့ပေးပို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့တွင်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုဆက်သွယ်ပေးရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အချက်အလက်ပိုင်ရှင်သည် info@lasers-pointers.com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းအခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။